June 2014 – လောကချမ်းသာ
LokaChantha June 18, 2014 Uncategorized Read More...
စဉ်းစားဝေဖန် အသိဉာဏ် အမှန်ကိုယ့်တွက်သာ – ဘုန်းဘုန်းဦးပညာ(နယူးဂျာစီ)
… ဟင် .. ဟုတ်လား? ဒီလိုဆို တော်တော်ဆိုးတာပေါ့။ ဒါကတော့ ဘယ်တရားမလဲ? သနားစရာကောင်းပါတယ် ..လို့ သတင်းစကားတစ်ခုကို ကြားရင် ကြားဝင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချတတ်တာဟာ လူ့သဘာဝ ဖြစ်မှာပါ။
`တော်တော်ဆိုးတာပေါ့´လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် […]
ရွှေဘိုသို့ နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းတရားတော် – မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
LokaChantha June 17, 2014 Uncategorized Read More...
ဤငါတို့ ဂေါတမဘုရားရှင်၏ လက်ထက်တော်တွင်ကား ရာဇဂြိုဟ်မြို့တော်ရှိ ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်၏ သားဖြစ်လာကာ ရာဓဟု အမည်တွင်ခဲ့လေသည်။ ရာဓသတို့သား အရွယ်ရောက်လတ်သော် အိမ်ရာတည်ထောင်၍ နေထိုင်၏။ အသက်အရွယ် အိုမင်းလာသောအခါတွင်ကား သားမယားများက သူ့ကို မကြည်ဖြူကြတော့ပေ။ နဂိုကတည်းက ထိုင်စားနိုင်လောက်သည့် […]
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်၏ (၇)ရက်တရားစခန်း – သတ္တမနေ့(13-Jun-2014)
မောဟပါးမှ တရားရ – ပထမပိုင်း (မွန်းလွဲ ၂း၃၀ နာရီ)
မောဟပါးမှ တရားရ – ဒုတိယပိုင်း (ညနေ ၇ နာရီ)
LokaChantha June 15, 2014 Uncategorized Read More...
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်၏ (၇)ရက်တရားစခန်း – ဆဋ္ဌမနေ့(12-Jun-2014)
ရန်ပြေငြိမ်းမှ တရားရ – ပထမပိုင်း (မွန်းလွဲ ၂း၃၀ နာရီ)
ရန်ပြေငြိမ်းမှ တရားရ – ဒုတိယပိုင်း (ညနေ ၇ နာရီ)
LokaChantha June 13, 2014 Uncategorized Read More...
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်၏ (၇)ရက်တရားစခန်း – ပဉ္စမနေ့(11-Jun-2014)
ယောဂီများ သိထားစရာနှင့် သတိထားစရာ – နဝမပိုင်း (မွန်းလွဲ ၂း၃၀ နာရီ)
ယောဂီများ သိထားစရာနှင့် သတိထားစရာ – ဒသမပိုင်း (ညနေ ၇ နာရီ)
LokaChantha June 12, 2014 Uncategorized Read More...
LokaChantha June 11, 2014 Uncategorized Read More...
မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်၏ (၇)ရက်တရားစခန်း – စတုတ္ထနေ့(10-Jun-2014)
ယောဂီများ သိထားစရာနှင့် သတိထားစရာ – သတ္တမပိုင်း (မွန်းလွဲ ၂း၃၀ နာရီ)
ယောဂီများ သိထားစရာနှင့် သတိထားစရာ – အဋ္ဌမပိုင်း (ညနေ ၇ နာရီ)